IVivo ibhengeza i-4th Generation Screen Readers Fingerprint | I-Androidsis
IVivo ibhengeza isizukulwana se-4 sokuboniswa kwabafundi beminwe
Kutshanje, iVivo, enye yeenkampani zaseTshayina eziphumeleleyo kwimarike, ibhengeze oko Isizukulwana sesine se-teknoloji yokufunda iminwe yokubonisa ilungile kwaye kufutshane nokuphunyezwa. Oku kuxelwe kumnyhadala obubanjelwe eTshayina, kwilizwe lakhe.
Ngaphandle koko, ukwabonakalisile ukuba iphuhlise itekhnoloji entsha, ukusuka kwisandla seQualcomm, ebizwa ngokuba yi "DSP Ukukhawulezisa". Kuqala, oku kuyakwenziwa kwiQualcomm SD670 chipset.
IVivo ibanga ukuba itekhnoloji entsha yokubonisa kwiminwe yokufunda yi-40% ngokukhawuleza kunesizukulwana sangaphambili, enye iyafumaneka kwifayile ye- Vivo X21, Isixhobo esisungulwe ngo-Matshi walo nyaka. Ucacisile ukuba uyayivula ngokukhawuleza ngaphandle kokuba kunokukhanya okuninzi kwindalo esingqongileyo, kwaye kuthatha imizuzwana eyi-0.35 ukuvula ifowuni.
Umfundi omtsha weminwe ikhoyo kokubhengezwa nje Vivo X23, ke siyakuzazi zonke izibonelelo zale teknoloji intsha xa uyisebenzisa.
IVivo ikwasebenza neQualcomm kwiprojekthi entsha, ebizwa Itekhnoloji yokuKhawulezisa i-DSP. Le teknoloji yenza ukuba iiskrini zeminwe zeminwe zisebenze ngokukhawuleza nangcono, ngelixa zigcina inqanaba eliphezulu lokhuseleko. Ngokucacileyo, ngenxa yokuba isantya sokwamkelwa kweenzwa sonyukile, oko akuthethi ukuba ezinye izinto ezilungileyo ziye zenziwa idini.
Ngokumalunga nezinye iingxelo, uMlawuli oPhezulu weQualcomm kuLawulo lweMveliso uTim Yates uthe Itekhnoloji entsha isebenza kunye ne-Snapdragon 670, kwaye oko kwandisa ukusebenza ngamaxesha e-1.8, xa kuthelekiswa ne-Snapdragon 660. I-chipset iza ne-Hexagon 685 DSP, eyintliziyo yetekhnoloji. Le yeyona DSP ikhethiweyo kwi-Snapdragon 845, eyona nkqubo iphambili kwi-Chip ye-American firm.
I-DSP ikhawuleza ekusebenzeni kwemisebenzi ye-neural kunye nedatha yeminwe, Xa kuthelekiswa neCPU. Ngokwabela i-DSP umsebenzi wokuvula ifowuni ngesikena seminwe, idatha iqhutywa ngokukhawuleza, oko kuthetha ukuba ifowuni ivula ngokukhawuleza.
I-Hexagon 685 DSP isebenza kunye neQualcomm yeNdawo yokuSebenza yokuSebenza kwi-CPU yokhuseleko olongeziweyo. Iziphumo zokulungiswa kwedatha yeTekhnoloji yokuKhawulezisa i-DSP ukuya kumaxesha ama-3 ngokukhawuleza kunokuba ifike kwi-CPU ephethe umsebenzi.
Uyaphila utsho Itekhnoloji yokuKhawulezisa i-DSP iya kukhutshwa njengohlaziyo lwesoftware, Njenge teknoloji yeHuawei's GPU Turbo. Okwangoku, iya kufika kwiVivo X23, entsha iphrimiyamu ekumgangatho ophakathi. Oku kuyonyusa isantya sokuvula isithwebuli somnwe ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30, ngakumbi kwiimeko apho iqondo lobushushu liphantsi kwaye iminwe yomile, kunye neemeko zokukhanya okuthe ngqo okuthe ngqo, njengosuku olunelanga kakhulu. .
Umenzi ukwaphawule oko usebenze nzima ixesha elingaphezulu konyaka, kwaye ifake isicelo samalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-140 ahambelana nezixhobo zetekhnoloji kunye nesoftware, ukuyenza ukuba ibe yinkokeli kushishino lweefowuni kwaye ibe nguvulindlela kuphuhliso lobuchwephesha bokuvula, ngaphandle kombuzo.
Khumbula oko inkampani iphehlelele umnxeba wokuqala kwimarike ngesikena sokubonisa ngeminwe, i Ndihlala kwiX20 Plus, ngoJanuwari walo nyaka. Kwi-MWC 2018, ibonakalise iVivo APEX, i-smartphone ene-in-display scanner yeminwe egubungela ukuya kwi-40% yesikrini.
Itekhnoloji yesizukulwana sesibini yeminwe yakhutshwa kunye neVivo X21, ngelixa isizukulwana sesithathu sibonisa itekhnoloji yeminwe, ene-40% yokuchaneka komfanekiso ophakamileyo kunaleyo yeVivo X21, eyaqala ukubonwa Ndihlala NEX. Itekhnoloji yayo yesine yesine yeminwe yokukhutshwa kweminwe iya kukhutshwa kunye neVivo X4.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IVivo ibhengeza isizukulwana se-4 sokuboniswa kwabafundi beminwe
Layton: ilali engaqondakaliyo ngoku iyafumaneka kwiVenkile yokudlala
Sifanele ukufomatha nini ifowuni yethu ye-Android?